Hongu, iyo Apple Watch Series 5 inobvumidza iwe kudzima "inogara ichiratidzwa" | Ndinobva mac
Ehe, iyo Apple Watch Series 5 inobvumidza iwe kudzima "inogara ichiratidzwa"
Uye ndezvekuti vazhinji venyu mune kusava nechokwadi kumwechete kwataive nako sezvo Apple isina kusimbisa iyi sarudzo mune yakakosha uye kana muchiita kudaro isu hatizive. Chero zvazvingaitika zvakakosha kuti uzive izvozvo Pese patinoda kuremadza iyi inogara iri-pachiratidziro sarudzo, tinozokwanisa kuzviita.
Izvi zvinofanirwa kureva kuwedzera kukuru mukuzvimiririra kwechigadzirwa nekuti kunyangwe iko kushandiswa kwekuve nechiratidziro nguva dzose kuri pasi, chimwe chinhu chinofanira kucherechedzwa. Naizvozvo isu tichafanira mirira bvunzo dzekutanga dzewatch kuona kuti kuzvimiririra kunowedzera kana kuderera neizvi «nguva dzose kuratidzwa»Ye itsva Apple Watch Series 5.
Tambo dzesimbi dzinogona kukonzeresa ku Series 5 kambasi
Iyi ndeimwe yemitambo mitsva iyo mawachi akaunzwa nayo, kuwedzera kune yakavakirwa-mukati kambasi o iyo 32 GB yekuchengetedza kwemukati iyo ikozvino ine itsva Apple Watch modhi. Chinhu chakanaka pamusoro peichi chinogara chiri-pachiratidziro ndechekuti wachi yacho inokwanisa kugadzirisa iwo mafaera uye zvimwe zvemukati izvo zvatinoona pachiratidziro sematambudziko, zvekuti zvinoshandisa zvakati wandei uye patinotenderedza ruoko zvese zvinogadzirwa zvakare.
Asi avo vashandisi vanoda kuchengetedza bhatiri rakawanda uye havadi kana havadi kuve neApple Watch skrini nguva dzose vanogona kudzora basa iri. Isu hatifungi kuti izano rakanaka kuita izvi sezvo zvinoita sekusununguka kugara uine skrini ichiona uye kuona nguva nguva dzese pamwe neruzivo rwezvikamu, asi iyi sarudzo yatichava nayo kesi dzatinoda kuzvitonga kuzere pakurinda uye izvo kunyangwe kana iri diki, chimwe chinhu chinofanira kucherechedzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ehe, iyo Apple Watch Series 5 inobvumidza iwe kudzima "inogara ichiratidzwa"
Zadza runyorwa rwemitambo inowanikwa nhasi muApple Arcade
Apple inozvidzivirira pachayo nezvakanaka zvakatemwa neEU emamirioni e13.000 mamirioni